Iplatifomu yeshumi eneSpoorky enomhleli wenqanaba layo | I-Androidsis
ISpoorky liqonga eliba yinto eyothusayo ngokuba nayo yonke into onokuyilindela kwisihloko solu hlobo. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa ibandakanya umhleli wenqanaba ukuba azilayishe kwi-intanethi nakwabanye abadlali ukuzama ukuzigqiba.
Kwaye iSpoorky liqonga elicwangciswe kakuhle kwaye okokuqala, ukuba ubungazi ukuba inomhleli wenqanabaUya kumangaliswa yindlela eyenziwe kakuhle ngayo. Imibala kwi-pixel, oopopayi be-curradas, iimeko zeNintendo kakhulu kunye nazo zonke ezo mechanics ezilawula ukwandisa kakhulu ukonwaba okunokubakho kumdlalo ngamnye.
1 Iqonga lokwenyani
2 USpoorky kunye nomhleli wenqanaba lakhe
3 Ukwenza eyakho "inethiwekhi yoluntu"
Kukho amaqonga athile, ungasathethi ke ngoMenzi weSuper Mario ophule yonke into, ukuzama ukufikelela kwinto esele ikho efanayo kwiNintendo. Kodwa bayasilela kwinto ebaluleke kakhulu, umdlalo wokudlala ngokwawo ukuba yintoni iqonga. Akuncedi nganto ukuba uyazivumela uyile amanqanaba, ukuba xa uwadlala awuzonwabisi njengomfana otsiba ukusuka apha ukuya phaya, ukufumanisa iindawo ezifihlakeleyo okanye ukusebenzisa oomatshini bokutsiba okuvumela ukuba ufikelele kwamanye amaqonga.
Kwaye kulapho USpoorky ubetha itafile enkulu ukuba nesiseko sokudlala kakhulu esonwabileyo kumdlalo ngamnye. Ukumangaliswa okukhulu, xa sisazi ukuba sinokudala amanqanaba ethu, sabelane ngawo nabahlobo kunye nabadlali be-Intanethi, ukuba bangene kukhuphiswano lokukhetha ezona zilungileyo kwiitumente zeveki nganye okanye ukuba ungonwabela imo yoqeqesho kunye- kumanqanaba afakiweyo, siyaqonda ukuba kuninzi kakhulu kunokuba besicinga ekuqaleni.
Umdlalo omninzi ewe njengamanye amaqonga amahle. USpoorky ujonge ukwenza iqonga lonke, ngokungathi yinethiwekhi yoluntu, apho wenza amanqanaba, wabelana ngawo, landela abanye abadlali, ukale abo bayenzayo kwaye ufumane neebheji ezibizwa ngokuba yiSpoorky Hooves. Njengombono ulungile, kwaye njengomdlalo kuyafana.
USpoorky kunye nomhleli wenqanaba lakhe
ISpoorky ibonelela ngamathuba okuba yenza amanqanaba akho ngomhleli. Kwaye inyani kukuba isebenza kakuhle kakhulu. Oko kukuthi, sinokwenza amanqanaba amakhulu kwaye inazo zonke izixhobo eziyimfuneko zokuqhuba inkqubo yendalo. Umzekelo, sinezithupha, esinokubeka naphi na kwinqanaba lokufikelela ngokukhawuleza kuloo ndawo.
Ngele ndlela ihambisa yonke inkqubo yokuyila. Sinezixhobo ezinjengokuzoba, esetyenziselwa ukubeka iintshaba, imihombiso kunye nokwenza amaqonga. Ke ukhetho lokumba, olunika amandla okuguqula ezo ziqonga. Kubalulekile ukuba uyazi nendlela yokudlala ngokusondeza, kuba ngale ndlela uya kuba nakho ukuzikhupha kwaye ubone ukuba indalo yakho iya phi.
Kwaye ukuze ufikelele kumanqanaba owenzayo, uneakhawunti yakho onokuyisebenzisa Vumelanisa ngelifu. Oko kukuthi, uya kwabelana ngemakishi, amanqanaba kunye nabasebenzisi kuso nasiphi na isixhobo esiphathwayo okanye amaqonga. Kuba sine-Spoorky kwi-PC, ke unokuthelekelela yonke into onayo ngalo mdlalo ubalaseleyo.
Ukwenza eyakho "inethiwekhi yoluntu"
Ukusuka kwinxalenye yomdlalo weqonga, ihagu yethu ephambili ihamba ngokumangalisayo, nangona singathanda ukuba sikwazi ukwenza ngokusesikweni iiqhina lolawulo, kuba iintolo zendlela zibekwe kude ezantsi esikrinini. Ukuphumla, ushukuma ngokumangalisayo ukonwabela ukutsiba kwakhe, ezo zibetho azinika iintshaba zakhe kunye nezo ndawo zifihlakeleyo azifumanayo.
Ngokobuchwephesha kunjalo ngokugqibeleleyo. Kwaye kubonisa kakuhle ukuba bayisebenzile. Uyilo lomlinganiswa, ubugcisa be-pixel obukhulu obenziweyo kwaye umbala ophuphuma kuyo yonke indawo umile, kwaye uninzi. Kananjalo ulawulo kunye noopopayi balumkile. Imeko-bume, kakhulu njengeSuper Mario, zikwabeka ezazo ukusizisela iqonga leshumi. Siphoswa kuphela uhlaziyo olusivumela ukuba sizise umxholo ngakumbi ukwenza amanqanaba ahlukeneyo ngeentshaba ezininzi, imihombiso ...
ISpoorky liqonga leshumi ngubani ofuna ukuzenzela indawo njengoluhlobo "lwenethiwekhi yoluntu" apho onwabela amanqanaba oya kuthi uwenze kunye namanye amakhulu abanye abadlali. Ukutyunjwa okungaphumeleli kwifowuni yakho ye-Android.
Iqonga lokwenyani le-retro
Umhleli wenqanaba lokusebenzisa ngokulula
Mhlawumbi ayinaso umxholo
Umthuthukisi: Uphuhliso lweGuGames
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Iqonga leSpoorky liyamangalisa: yenza amanqanaba akho kwaye udlale abanye babadlali
Utshintsha njani ubungakanani befonti kwi-Android